Photograph (2019) | MM Movie Store
ဒီကုလားကားဟာ The Lunch box ရုပျရှငျရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျဒါရိုကျတာ Ritesh Batra ရိုကျကူးထားတာပါရုပျရှငျဟာ ဟငျဒီကားတှထေုံးစံဖွဈတဲ့အကတှေ အဆိုတှေ မပါပဲအေးအေးငွိမျ့ငွိမျ့လေးနဲ့ ဆှဲချေါသှားတဲ့old-school style drama flim အမြိုးအစားပါဆိုတော့ မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျအကအဆိုတှကေို တှရေ့မှာ မဟုတျပါဘူး…
မှနျဘိုငျးမွို့ ပငျလယျဆိပျကမျးအဝငျမွို့ဦးမုဒျဝမှာ ဓာတျပုံဆရာအဖွဈ အသကျမှေးတဲ့ ရာဖေး (Nawazuddin Siddiqui ) ရှိပါတယျ
တနမှေ့ာတော့မယျလိုနီ(Sanya Malhotra) ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးလေးတယောကျဟာသူ့ဆီမှာ ဓာတျပုံရိုကျပွီး ပုံထုတျပေးနတေုနျးမှာပဲမယျလိုနီ့အမကေ လှမျးချေါတော့ကောငျမလေးဟာ သူ့အမဆေီ့ထှကျသှားမိပွီးဓာတျပုံဖိုးရှငျးဖို့မနေ့ခေဲ့တယျာဖေးရဲ့ရှာမှာ ရာဖေးအဖှားကနျြနခေဲ့ပွီးအဲဒီအဖှားက သူ့မွေးကို မိနျးမယူဖို့ တဆူဆူတပူပူပေါ့
ါကွောငျ့ နားအေးပွီးရောအဖှားဆီကို သူကောငျမလေးတယောကျ ရနပွေီဆိုတဲ့အကွောငျး စာရေးပွီးသူ့ဆီကနျြနခေဲ့တဲ့ မယျလိုနီ့ဓာတျပုံကို ထညျ့ပေးလိုကျပါတော့တယျ….အလှယျနညျးနဲ့ဖွရှေငျးလိုကျပမေယျ့ သူဟာ အဖှားကိုလြော့တှကျခဲ့ပုံပါပဲ…အဲ့ဒီနောကျတော့ ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး….
ဒီဇာတျကားဟာ ရုပျရှငျတကားကွညျ့ရတာထကျစာအုပျတအုပျဖတျရတာနဲ့ ပိုတူကောငျးတူနိုငျပါတယျဇာတျလမျးနာမညျဟာ photograph ဆိုတဲ့ ရိုရိုးရှငျးရှငျးနာမညျလေးအတိုငျးပဲ
ဇာတျလမျးဟာလညျးရိုးရိုးလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ လူသဘာဝလေးတှကေို သခြောလေး set up လုပျ ရိုကျကူးထားတာကွောငျ့ရိုးရိုးငွိမျ့ငွိမျ့ကွညျ့ခငျြသူတှအေတှကျ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ရုပျရှငျတကားလို့ပဲ ပွောပါရစေ…
ဒီကုလားကားဟာ The Lunch box ရုပ်ရှင်ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်ဒါရိုက်တာ Ritesh Batra ရိုက်ကူးထားတာပါရုပ်ရှင်ဟာ ဟင်ဒီကားတွေထုံးစံဖြစ်တဲ့အကတွေ အဆိုတွေ မပါပဲအေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားတဲ့old-school style drama flim အမျိုးအစားပါဆိုတော့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်အကအဆိုတွေကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး…
မွန်ဘိုင်းမြို့ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းအဝင်မြို့ဦးမုဒ်ဝမှာ ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ် အသက်မွေးတဲ့ ရာဖေး (Nawazuddin Siddiqui ) ရှိပါတယ်
တနေ့မှာတော့မယ်လိုနီ(Sanya Malhotra) ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ဟာသူ့ဆီမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပုံထုတ်ပေးနေတုန်းမှာပဲမယ်လိုနီ့အမေက လှမ်းခေါ်တော့ကောင်မလေးဟာ သူ့အမေ့ဆီထွက်သွားမိပြီးဓာတ်ပုံဖိုးရှင်းဖို့မေ့နေခဲ့တယ်ာဖေးရဲ့ရွာမှာ ရာဖေးအဖွားကျန်နေခဲ့ပြီးအဲဒီအဖွားက သူ့မြေးကို မိန်းမယူဖို့ တဆူဆူတပူပူပေါ့
ါကြောင့် နားအေးပြီးရောအဖွားဆီကို သူကောင်မလေးတယောက် ရနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း စာရေးပြီးသူ့ဆီကျန်နေခဲ့တဲ့ မယ်လိုနီ့ဓာတ်ပုံကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်….အလွယ်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ပေမယ့် သူဟာ အဖွားကိုလျော့တွက်ခဲ့ပုံပါပဲ…အဲ့ဒီနောက်တော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….
ဒီဇာတ်ကားဟာ ရုပ်ရှင်တကားကြည့်ရတာထက်စာအုပ်တအုပ်ဖတ်ရတာနဲ့ ပိုတူကောင်းတူနိုင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းနာမည်ဟာ photograph ဆိုတဲ့ ရိုရိုးရှင်းရှင်းနာမည်လေးအတိုင်းပဲ
ဇာတ်လမ်းဟာလည်းရိုးရိုးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လူသဘာဝလေးတွေကို သေချာလေး set up လုပ် ရိုက်ကူးထားတာကြောင့်ရိုးရိုးငြိမ့်ငြိမ့်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်တကားလို့ပဲ ပြောပါရစေ…
The Boys (Season 2) ၊ အပိုငျး (၂)